Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း)
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း ဆိုတာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အရိုးတခုခုကျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ နှာခေါင်း ပါးအရိုး မျက်လုံးနားကအရိုး နှင့် မေးရိုးတို့ပါဝင်သည်။
များသောအားခြင့် ထိခိုက်မိသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ဥပမာ မော်တော်ကားတိုက်ရင်း အားကစားလုပ်ရင်းတိုက်မိခြင်း ပြုတ်ကျခြင် သို့မဟုတ် ရန်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ တခါတရံတွင် မျက်နာရှိအရိုးများအားနည်းခြင်းသည် သွားနင့်ပတ်သတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်သည်။
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကျိုးသောမျက်နှာအရိုးပေါ်မူတည်၍ လက္ခဏာများမတူနိုင်ပါ။ အချို့သောလက္ခဏာဥပမာ နာခြင်း ယောင်ခြင်း နှင့် အညိုအမဲစွဲခြင်း တို့သည်အရိုးကျိုးခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ပါးအရိုး မေးရိုးအပေါ်ပိုင်းကျိုးခြင်း(ဇိုင်ကိုမက်တစ် မက်စလရီအရိုးကျိုးခြင်း)
ထိမိသောဘက်ရှိ မျက်လုံးအောက်တွင် အာရုံခံမှုများပြောင်းလဲသွားခြင်း
မျက်လုံးနေသော အရိုးပါဝင်သည်။ တုံးသောအရာ ဥပမာ ဘောလုံး မျက်လုံးအားရိုက်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မျက်လုံး အဖြူပိုင်းတွင် နာခြင်းသို့မဟုတ် သွေးထွက်ခြင်း
နဖူး မျက်ခွံ ပါး သို့မဟုတ် အပေါ်နှုတ်ခမ်း သွား ထုံခြင်း
ပါး သို့မဟုတ် နဖူးတွင်ယောင်ခြင်း
အညိုအမဲစွဲခြင်း ယောင်ခြင်း သို့မဟုတ် နာခြင်း
လျာအနောက်တွင် အညိုအမဲစွဲခြင်း( မေးရိုးကျိုးသည်ဟု ဖော်ပြသည်)
အောက်နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် မေးစိထုံခြင်း
အဓိကလက္ခဏာမှာ ယောင်ခြင်းသို့မဟုတ် ပုံသဏာန်မမှန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။
မျက်နှာရိုးကျိုးပါက ဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့သင့်သည်။ အချို့သော အရိုးကျိုးခြင်းက အသက်အန္ထာရယ်ရှိနိုင်သည်။ အချို့က ပြန်မကောင်းနိုင်သော အသက်ရူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အသက်ရူလမ်းကြောင်း အာရုံကြောစနစ် သို့မဟုတ် အမြင် ပြသာနာများဖြစ်နိုင်သည်။
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်နှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက မျက်နှာအရိုးကျိုးနိုင်သည်။ မော်တော်ကား မော်တော်ဆိုင်ကယ် သို့မဟုတ် စက်ဘီး မတော်မဆမှုများကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအပြင် အားကစား ဥပမာ ဘေ့ဘော ဘောလုံးကစားခြင်းများမှ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မေးရိုးကျိုးခြင်း သည် မျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခတ်ခံရခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသက်မှုများကို အရိုးကျိုးသောပုံစံအပေါ်မူတည်၍လုပ်လိမ့်မည်။ မျကိနှာတွင် ယောင်ခြင်း နာခြင်းရှိပါက ဆရာဝန်မှစမ်းသက်လိမ့်မည်။ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုလည်း စမ်းသက်လိမ့်မည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့လိုအပ်နိုင်သည်။ အချို့စမ်းသက်ချက်များက အရိုးကျိုးမှုကိုသိသိသာသာပြနိုင်သည်။
Broken facial bone (မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရိုးကျိုးခြင်းပြင်းထန်ပါက ကုသမှုလိုအပ်နိုင်သည်။ အောက်ပါတို့ကိုလိုအပ်နိုင်သည်။
ပုံမှန်နေရာသို့ ကျိုးနေသောအရိုးကိုပြန်တည့်ထားသည်။ နှာခေါင်းအရိုးကျိုးခြင်းတွင်ပိုသုံးတတ်သည်။ ခွဲစိတ်မှုတော့မလိုတတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
နှာခေါင်းတွင်းရှိလေအိတ် နှင့် မျကိလုံးအိမ်တို့အား ကြည့်ရန်သုံးသည်။ ထိုမှန်ပြောင်းတွင် ပြွန်အရှည် နှင့် မှန်ဘီလူး အလင်းတို့ပါဝင်သည်။ အပေါ်သွားဖုံးနှင့် နှုတ်ခမ်း ပါးရိုးအနောက်ဘက်ရှိ လေအိတ်အတွင်းတို့ထည့်သည်။ဦးခေါင်းခွံတွင် အနည်းငယ်ခွဲပြီး သို့မဟုတ် နဖူးအနောက်ရှိ လေအိတ်အတွင်းကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။ မှန်ပြောင်းကြည့်ချိန်တွင် ကျိုးနေသောအရိုးငယ်အားလည်းဖယ်နိုင်သည်။ အချို့သောကိရိယာများဖြင့် အရိုးကျိုးမှုအားထောင့်ပံ့နိုင်သည်။
ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေး။ ရင်ကျပ်ပြောက်ဆေးကနှာခေါင်းနှင့် အရိုးတွင်းရှိလေအိတ်များယောင်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
အနာသက်သာစေသောဆေး။ အနာသက်သာရန်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ဆေးမသောက်ခင် အရမ်းနာသည်အထိမစောင့်ပါနှင့်။
စတီးရွိုက်။ ထိုဆေးများက မျက်နှာယောင်ခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
ပိုးသတ်ဆေးဝါးများ။ ဘက်တိးရိးယားကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများကုသရာတွင်သုံးသည်။ အနာပွင့်ထွက်နေသောဒဏ်ရာများကိုကုသနိုင်သည်။
သွားအရိုးကျိုးခြင်း ကိုကုသဖို့လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိခိုက်မိပြီး မေးရိုးစိရာတွင် သွားမညီပါက ထိုကုသမှုကိုသုံးနိုင်သည်။
ဖွင့်ပြီး ပြန်ဆက်ပေးခြင်း။ ထိုခွဲစိတ်မှုကို အိုအာအိုင်အက်စ် ဟုခေါ်သည်။ ထိုလုပ်ဆောင်မှုတွင် ဆရာဝန်မှုအရိုးကျိုးသောနေရာကို ခွဲလိမ့်မည်။ ဝိုင်ယာ မူလီသို့မဟုတ် ပလိပ်ပြားတု့ကိုအသုံးပြု၍ မျက်နှာအရိုးအားပြန်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ အနာကျကိချိန်တွင် အရိုးလှုပ်ခြင်းအားကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသောခွဲစိတ်မှု။ ထိခိုက်မှုကြောင့် မျက်နှာအရိုးပုံစံမကျခြင်းကိုကုသရာတွင်သုံးသည်။ ကျိုးနေသောအရိုးအား ဖယ်ပြီး အစားထိုးမှုလုပ်သည်။ အစားထိုးမှုသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရှိကျန်းမာသောအရိုး သို့မဟုတ် လှူဒါန်းသူဆီမှ ယူ၍ လိုအပ်သောနေရာသို့ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲကိုအသုံးပြုပါ။ ရေခဲသည် ယောင်ခြင်းနာခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ရေခဲသည် တစ်သျူးများပျက်ဆီးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ ရေခဲကိုခြေပြီး ပလက်စတစ်အိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ။ တာဝါဖြင့်အုပ်ပြီး မျက်နှာပေါ်သို့ ၁၅ မှ ၂၀မိနစ် ကိုတစ်နာရီတခါ သို့မဟုတ် ညွန်ကြားသည့်အတိုင်းလုပ်ပါ။
ခေါင်းကိုမြှောက်ထားပါ။ ခေါင်းကိုသင့် နှလုံးအပေါ်သို့မြှောက်ထားပါ။ ယောင်ခြင်းနာခြင်းကိုကျစေသည်။ စောင်သို့မဟုတ် ခေါင်းအုံးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သက်သာစွာနေနိုင်သည်။
ထိခိုက်မိသောဒဏ်ရာဘက်သို့မအိပ်ပါနှင့်။ ဖိခြင်းကြောင့် ပိုဒဏ်ရာရလာစေသည်။
ပါးစပ်ဖြင့်နှာချေခြင်းကြောင့်မျက်နှာအရိုးကျိုးခြင်းအားဖိခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ နှာချေခြင်းကြောင့်ဖိအားများပါက အရိုးအားလှုပ်စေပြီး ပိုထိခိုက်စေသည်။
နှာခေါင်းကိုထိခိုက်မိခြင်းကိုရှောင်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မျက်လုံးနားအရိုးကျိုးပါက ပိုထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းအားထိုးမိ၍ဖြစ်သော ဖိအားကြောင့်မျက်လုံးရှိ အာရုံကြောများထာဝရပျက်စီးနိုင်သည်။
ပါးစပ်ကိုသန့်စင်စွာထားပါ။ ပါးစပ်နားတွင် ဒဏ်ရာသို့မဟုတ် အရိုးကျိုးခြင်းတို့ရှိပါက သွားကိုသန့်စင်ရန်ခက်ခဲတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့သူမှ အသက်သာဆုံးမထိခိုက်စေသောနည်းကိုပြပေးလိမ့်မည်။ ကလေးသုံးသွားတိုက်တံ့များက ပါးစပ်ကိုသန့်စင်ရာတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပေးသည်။
Facial fractures. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/facial-fracture#2. Accessed November 2, 2017
Facial fractures. https://www.drugs.com/cg/facial-fracture.html. Accessed November 2, 2017